Ny fetran'ny famoronana rehefa mamorona sary famantarana minimalist | Famoronana an-tserasera
Ireo logo izay ho hitanao amin'ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny boky famolavolana taona 1970. Azo antoka fa mety nifangaro tamin'ny roa ianao tamin'ny sary lohateny, mampatsiahy ny Flipboard, fampiharana mpamaky vaovao, ary Beats, marika fanta-daza amin'ny fakan-tsarimihetsika mahafinaritra.
Rehefa manamboatra sary famantarana minimalista isika dia afaka mahita fa, aorian'ny famolavolana ny foto-kevitra sy famindrana azy amin'ny programa famolavolana dia tsapantsika fa mitovy be amin'ilay sary famantarana io marika iray. Azontsika atao koa ny mametra fetra amin'ny sary an-tsaina na famoronana mba hananana sary famantarana manasongadina minimalism.
Raha mijery zavakanto isika na eo amin'ny tontolon'ny sarimiaina aza, ireo genius toa an'i Chuck Jones, mpanentana ao Warner ary ekena amin'ny fanaovana sary toa ny olon-kafa ny tantara an-tsary nataon'i Tweety sy ny tarehimarika hafa, naka tahaka an'i Harold Loyd, heverina ho iray amin'ireo mpanao hatsikana lehibe teo amin'ny tantara. Angamba ny kopia dia tsy ny matoanteny mety, fa ny aingam-panahin'ity mpanao hatsikana malaza ity dia nentanin'ny aingam-panahy, hanome azy azy ny fombany, zavatra iray izay nahatonga ilay mpanentana lehibe an'i Warner, ho lasa tokana.
Izahay izao mijery minimalism amin'ny famolavolana logo, ary afaka miverina amin'ny mahita izay mpamorona aingam-panahy tamin'ny taona 70. Ary bebe kokoa amin'ity faritra ity izay misy fironana hampihena ny tena ilaina ary ny hanala ireo singa be loatra, araka ny voarakitra ao amin'ny Wikipedia rehefa mamaritra io fomba io amin'ny fomba mahazatra.
Ka mahita vitsivitsy isika ferana io eritreritra tsy manam-petra io izay tsy maintsy ananan'ny mpamorona logo ary mila manome izany famoronana manokana izany. Mety hiatrika vahaolana vitsivitsy voafetra isika, saingy ao anatin'io fikitihana sy antsipiriany manokana io dia ahitantsika izay manavaka antsika toy ny nitranga tamin'i Loyd sy Jones.
Tahaka ny mahazatra dia mamela anao handray anjara hafa aho avy amin'ny fidirana hafa mifandraika amin'ny logo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Misy fetran'ny famoronana ve rehefa mamorona sary famantarana minimalista?